Barcelona Oo War Ka Soo Saartay Dhaawaca Jordi Alba & Gerard Pique - Ceelhuur Online
Home > Ciyaaraha > Barcelona Oo War Ka Soo Saartay Dhaawaca Jordi Alba & Gerard Pique
October 20, 2016 Hafsa Haji406
Barcelona ayaa xaqiijisay in Jordi Alba uu seegi doono labada Isbuuc ee soo aadan garoomada kadib dhaawac muruqa ah oo soo gaaray, halka daafaca dhexe Gerard Pique uu seddex isbuuc garoomada kaga maqnaanaayo dhibaato dhanka canqowga.
Labada ciyaaryahan ayaa waxay dhaawacyo kasoo gaareen qeybtii hore ee kulankii Champions League Barcelona habeenkii Arbacadii, kaas oo kooxda reer Spain ku badisay 4-0 iyadoo a hat-trick uu dhaliyay Lionel Messi iyo gool soo daahay oo uu dhaliyay Neymar.
war ka soo baxay kooxda reer Catalan ayaa shaaca ka qaaday in Alba dhaawac cajirka ah uu ku maqnaanaayo laba todobaad halka Pique dhaawac canqowga midig ah, uu garoomada seegaayo sedex isbuuc.
labada daafac ayaa seegi doona safarka La Liga Barcelona ee Valencia Todobaadkan iyo kulanka guriga kooxda Granada dhamaadka bisha.
Alba ayaa laga yaabaa inuu taam u noqdo kulanka kooxda Man City 1-da November , laakiin Pique lama filayo inuu ku soo laabto garoomada illaa iyo kulanka horyaalka ee Barcelona ay la ciyaarayso Malaga ka dib ciyaaraha heerka caalami 19-ka November, taasoo la micno ah in uu sidoo kale ka maqnaan doona xulka Spain.
W/D Hafsa Haaji
Siyaasi Cabdiraxman Black”Doorashada Maamulka Hirshabeelle waxaa loo adeegsaday Lacag”
October 17, 2017 Hafsa Haji
November 6, 2017 Hafsa Haji